Sunday, 15 Sep, 2019 2:40 PM
चिया प्रायः ले हरेक मौसममा पिउने पेयमा पर्छ । चियालाई दैनिक जीवनशैलीको संस्कृति भन्दा पनि हुन्छ । चिया अधिक पियो भने स्वास्थ्यमा असर पनि गर्न सक्छ । तर यसलाई मिलाएर पिएमा स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्ने विभिन्न अनुसन्धानहरुले पुष्टि गरेका छन् । मदर नेचर नेटवर्कले चिया पिउँदा स्वास्थ्यमा हुने प्रमुख पाँच फाइदा सूचिकृत गरेको छ ।
१. क्याफिनेटेड तातो चियाले ग्लुकोमाको जोखिम कम गर्छ
२. कालो चियाले रक्तचाप कम गर्न सहयोग गर्छ
३. ग्रीन टी ले क्यान्सरसँग जुध्न सहयोग गर्छ
४. क्याफिन मुक्त हर्बल चियाले मेटाबोलिक डिजिजको जोखिम कम गर्न सहयोग गर्छ
५. दूध चियाले अक्सिडेटिभ स्ट्रेस कम गर्नका लागि सहयोग गर्छ